Afaka bisikileta hà atody ve ianao? - Hitaingina Bisikileta
Tena > Hitaingina Bisikileta > Bike pokemon go - fanovozan-kevitra feno
Bike pokemon go - fanovozan-kevitra feno
Afaka bisikileta hà atody ve ianao?
Raha fintinina, mitaingina abisikileta afakaho fomba mahavokatra tanterakafoy ny atodyary manangona XP, raha mbola mitazona ny fampiasa amin'ny fampiharana ireo mpampiofana hizaha ny tontolo manodidina azy ireo. Aza adino fotsiny ny miomana bebe kokoa ary mitandrema. Novambra
Tsy manana lasantsy ao anaty skateboard-ko aho ka nandeha teny amin'ny skateboard -ko ilay skateboard-nao dia tsy misy lasantsy? - Ie, ka nentiko teto - Eny, andao hofeno lasantsy. Vola volamena io - Tsy manana farantsa aho - Inona? - (mihomehy) - Raiso ny farantsanao ry madama a! - Naja.Hi! - F'inona no mitranga? - Hanao Adley efatra izahay - Adley efatra? - Ie. - Fa maninona no lazainao fa Adley efatra? - Satria efatra aho! - (mihomehy) Ny lahatsoratra androany dia ny hevitr'i Adley ihany.
Lalao ankafiziny indrindra tiany io. Ka tena te-hanao lahatsoratra iray izy. Inona no ataontsika? ? - Milalao tobin-tsolika izahay - Izaho no fianakaviana voalohany sa izaho no karazana tobin-dasantsy voalohany? - Ianao no karazana tobin-dasantsy voalohany - (mihomehy) Eny, ianao ve no voalohany amin'ny fianakaviana? - Ie. - Eny, tobin-tsolika sy fianakaviana, andao ary! - Andao hamarana azy! - Oh eny, tsy maintsy atsanganay izany. (Feon'ny fiara mandeha mafy loatra) Eny, inona no ilaintsika voalohany? - Mila sticker kely izahay. - Ho aiza ny tobin-tsolika? - Eny, ho avy tsy ho ela ny tobin-tsolika.
Satria misy fantsom-pitrandrahana solika.- Eny, izany no fantsom-pitrandrahana solika.- Ity no fitaovana hiasako.- Asa.- Atoro anao ny tranoko.- Eny, inona ny tranonao? - Ny zava-drehetra, ny tranoko.- Ity no tranonao iray manontolo? - Eny.- Ary mety miasa ianao eto, eto.- Eny, apetrako eto ny entako.- Eny, inona koa no ilaintsika? - Eh, mila ny bisikiletako aho .- Mila bisikileta aho ary mila paompy rivotra ho an'ny kodiarana bisikileta satria izaho no tobin-dasantsy.
Eo moa! - Andao alao ny fananantsika! - Ao amin'ny garazy izy io.-Eto ny entako. Mitenena, azonao ny fanananao, ho azoko ny ahy.- Tsy maintsy mamaky ny varavaran'ny garazy aho. - Okay. (misokatra ny varavarana misosika) - Hey, azonao vohana ve ny varavarana garazy? Kodiarana, kodiarana.
Oh, ity ny bisikiletako. Aleo ahantona ity. (Hum) Andao esory eto aloha ity.
Manana tànana roa aho. Angamba mitondra fiara. Woo, woo, woo, woo.
Ary eto ny bisikiletako. Ary milatsaka koa izy io. Andao alao ny ambiny.
Ugh. Hmm, izay rehetra miaraka aminy. Ity ny Playstation-ko.
Ankehitriny dia mahazo zavatra vitsivitsy hafa izahay.- Ananako ny fananako.- Manana ny A my pumper aho ary avy eo hitako ny poketranao niaraka tamin'ny volanao.- Manana izany aho.- Inona? Afo an-dasy, hevitra tsara izany.
Hosokafako ny tobin-dasantsy. - Okay. Mila zavatra aho.
Mividy zavatra ve isika eto? - Eny, azonao atao ny mividy tsakitsaky eto. Ary ireo no fitaovako hanamboarana ny fiaranao na ny bisikiletanao amin'ny tobin-dasantsy. Ary avy eo dia ny efitrano fiandrasana - (mimonomonona) - Hey, mbola tsy nisokatra aho! Mialà eto, nikatona.
Mialà eto! Yahhhh.- (mihomehy) - teboka roa ianao - misokatra ny tobin-tsolika! - andao mankany amin'ny tobin-tsolika - misokatra ny tobin-tsolika! misokatra izahay! - (mimonomonona moramora) kely - misokatra ny tobin-tsolika! - bip, bip. - Miasa amin'ny tobin-tsolika sy zavatra maro hafa.
Salama mpanjifa - Salama, tsy manana lasantsy amin'ny bisikiletako aho - Eny, oh tsia! Toa afaka mampiasa rivotra amin'ny kodiaranao ianao - Eny - Ary angamba fanadiovana. Te hanana fanadinana feno ve aho? - Eny .- Vola roa izany- Oh eny, hadinoko fotsiny ny poketrako.- Tsy nitondra vola ianao? - I-- Mialà eto, mila mahazo vola ianao. - Okay. (mihira) Park, park.
Andao alao ny volako. Avelao aho handray ity. Inty aho.
Nitondra ny volako tamin'ity indray mitoraka ity. - Ha? Salama mpanjifa. Miala tsiny fa vao avy namboatra skateboard aho. - Ho azoko ny volako. - Okay, hisy vola madinika 2.
Ny iray ho an'ny lasantsy ary ny iray ho an'ny fanamboarana - Eny ary, aza maka karatra - Eny, tsy mandray karatra izahay, fa vola madinika volamena fotsiny. (Vola fisoratana anarana) Raha te hampiasa ny karatrao ianao dia manana fivarotana eto izahay miaraka amin'ny gilasy sy zava-pisotro ary kojakoja ara-pahasalamana ary borosy makiazy. Mampiasa sarintany izahay any.
Ary avy eo dia misy faritra fiandrasana eto. Raha te hiandry ela kokoa ianao. - Andao hividy kilalao. (shh, shh, shh, shh) - Oh, azafady, mpanjifa, manana fanontaniana aho - Inona? - nofenoiko ny kodiarana ho anao ary hofenoiko izao - Okay - karazana entona inona no tadiavinao? - Um, gazy maintso .- Tsara, tsara izany. Glug, glug, glug, glug, glug, glug, glug. - Glug, glug, glug, glug, glug, glug, glug gluck Okay, feno izany.
Ny tsindry kodiarana dia tsara! Yep.- Manana ny ilaiko rehetra ato anaty kitapoko aho.- Oh, te-hividy an'ity ve ianao? - Eny.- Ok eny, mila mampiasa karatra ianao.
Manana karatra ve ianao? - Ie - Avelao aho hivezivezy haingana amin'ny scanner-ko ary hividy azy. Ary avelao aho hijery - Eny, avelao aho hijery azy - Eny ary, zavatra iray ihany - mila esoriko ny aroloko - Roa, telo, oh ary pancake? - Mhm. - Oh, borosy makiazy, tsara izany.
Okay, 17 $ izany. Karatra ihany no raisinay. - Eny ary, ary haverinao ny karatra rahampitso? - Eny, haverinay ny karatra rahampitso - Ity izany - Eny, avelao aho hikorisa azy - Tadidinao ve ny karatra hafa? - Okay, inona ny kaody? - Valo, enina, sivy.- Valo, enina, sivy, marina ny anao.
Eny ary, andao handeha. Misaotra, mpanjifa. Oh, mpanjifa, iza ny anaranao? - Ariel io. - Ariel ianao? - Ie. - Oh, faly mihaona aminao.
Ny anarako dia Tavy Chicken.- Mahafinaritra ny mihaona aminao.- Salama Ariel.- Salama.- Eny, mandehana ary miandry ao amin'ny efitrano fiandrasana.
Ity ny entana novidinao - hapetrako ny fiarovan-dohako - Amin'ny toerana fiandrasana? - Eny - Eny, mitandrema, fa mampidi-doza io. (misento) Ie, tsara ny familiana. Tsara izany, tokony ho salama tsara ianao. - Hey, te handeha bisikileta mandritra ny iray minitra ve ianao? - Ie, andao handeha.
Misaotra, mpanjifa, Ariel - veloma - manana ny andro tsara indrindra - ary any an-trano izahay, vroom andao hametahana zavatra vitsivitsy - misokatra ny tobin-tsolika skateboard! Misokatra ny tobin-tsolika Skateboard! - Tsy maintsy mitaingina ny skateboard-ko aho. Tsy manana lasantsy amin'ny skateboard-ko aho. Nandeha an-tongotra teto àry aho niaraka tamin'ny skateboard-ko. - Tsy misy lasantsy ny skateboard anao? - Ie, ka nentiko teto izany. - Eny, avelao ny gazy hameno azy.
Vola volamena io. - Tsy manana farantsakely aho. - Inona? - (chuckles) - Raiso ny farantsanao ry madama. - Glug, glug, glug, glug, glug, glug, glug, glug, glug - Mandeha izany. - Oh, misaotra, tsara, apetrako eo aloha ny lasantsy, tianao koa ve ny etona ao ambadika? - Eny - azonao atao ve ny manampy ahy amin'izany? - Ie. - Tsara izany, glug, glug glug, glug, glug, glug, glug, glug, Whoa, whoa, whoa.
Okay, lasantsy be io eo amin'ny skateboard anao? - Eny, tapaka ny kodiarako - Tsia, tapaka avokoa ny ankamaroany? - Eny - Eny izy ireo, hampiakatra azy ireo amin'ny rivotra ve ianao raha manamboatra azy aho? - Rehefa vao nitaingina ny skateboard-ko aho dia nianjera fotsiny ny kodiarako - Oh tsia. Ie, atsofohy amin'ny rivotra izy dia hataoko ny faritra hafa. - Nataoko. - Oh, eny, malalaka izy io, ankilany.
Eny ary, tokony ho salama tsara izy ireo izao. Okay, feno lasantsy daholo, jereo namboarina. Vonona handeha ianao. - Yay! - Misaotra anao tonga tao amin'ny fivarotako, veloma. - Tsisy fisaorana. (rrrrrrrr) - Misaotra nijery, veloma.
Mety ve ny mandeha bisikileta isan'andro?
Na dia hanatsara ny fahasalamanao aretim-po aza ny fanazaran-tena isan'andro toy ny bisikileta, hampiakatra ny fihetseham-ponao ary hampiakatra ny fitaizanao, dia afaka mandeha an-tongotra adiny iray isan'andro ianao fa tsy ho very kilao. Kivy be ianao, mety hahazo vitsivitsy aza. Ny fanaovana fanatanjahan-tena isan'andro dia tsy antony tsy miraharaha ny sakafonao.26 mart 2021
Ary mbola maro amintsika no mandeha bisikileta ary tsy manana olana velively. Ny mpitaingina bisikileta kosa, manao an'izany. Nataoko izany mba hilazako aminao fa rehefa misy zavatra mitranga dia tena mampiahiahy.
Jereo - ity no Andriamanitro ô! Nody faty tanteraka ny filahiako! 'Hiverina amin'ity indray ity isika rehefa mijery ny olana manodidina ny fahasalaman'ny lehilahy sy ny bisikileta. Mba hanaovana izany, dia niara-niasa tamin'ny iray amin'ireo urologista malaza any Angletera izahay - lehilahy iray antsoina hoe Anthony Koupparis - hanome torohevitra matanjaka sy azo ampiharina izay tokony henoin'ny lehilahy bisikileta rehetra ary rehefa mila antony hafa ianao fa tsy traikefa amin'ny klinika hinoanao ny zavatra lazainy. lehilahy vy koa izy ary mandany fotoana be ao amin'ny lasely ireto tovolahy ireto. Alohan'ny hanombohantsika, ity misy lesona momba ny anatomika haingana.
Ho fantatrao, azoko antoka fa rehefa mitaingina ny filahanao sy ny testicle dia miafina tsara matetika. Ny faritry ny tavy malemy eo anelanelan'ny fitombenanao sy ny testisinao dia antsoina hoe perineum anao, ary rehefa mandeha bisikileta ianao dia mifandray amin'ny lasely ity faritra ity. Eo ambanin'ny hoditra no misy ny uretrao, izay fantsona mampifandray ny tatavia amin'ny tontolo ivelany amin'ny alàlan'ny filahiana.
Ny perineum koa dia misy ny lalan-drà goavambe sy ny hozatrao pudendal izay manome ny fahatsapana ny faritra ary koa manampy amin'ny fananganana. Etsy ambonin'ny perineum no misy ny prostateo, ny fihary atodinaina izay mamorona tsiranoka azo avy amin'ny tsinay ary mamakivaky ny uretra. Raha jerena ny anatomia antsika sy ny endrik'ilay lasely, dia toa mety ny manao ny fifandraisana misy eo amin'ny bisikileta sy ny fanaintainana na ny fahatsentsenana, ny tsy fitrangan'ny erectile ary ny olana amin'ny prostate, fa andao jerena akaiky kokoa izany.
Fa tsy manahy. Tsy miharihary kokoa noho ny hitanao teo aloha izy ireo, hoy ny soso-kevitra nomen'izy ireo an'i Anthony mba hamaky an'ity lohahevitra ity. Noho izany dia manana tsy fahamatorana isika, tsy fiasa erectile ary koa homamiadan'ny prostaty, indrindra ny homamiadan'ny prostaty.
Mahatsapa aho fa mifankahalala tsara aho milaza izany momba izany. Tamin'izaho tao anaty tionelin'ny rivotra tao Indianapolis ary nanao fitsapana ny tionelina rivotra izahay, amin'izay dia tokony hipetraka moramora amin'ny bisikileta mandritra ny 30 minitra ianao ary ny bisikiletanao dia manadio tanteraka ny zoron'ny rivotra. Ny dikan'izany dia mila mihetsika tanteraka ianao amin'ny vatanao ambony, satria ny karazana twitching rehetra dia hanodikodina ny vokatra.
Noho izany dia tena toe-javatra artifisialy ny mitaingina bisikileta ary taorian'ny 30 minitra dia nidina aho ary tsapako fa vetivety dia tsy nisy fahatsapana mihitsy tamin'ny filahiako, izay tena mandeha tokoa, satria fantatrao fa niverina ilay fahatsapana. Ka amin'ny farany dia heveriko fa tsy nisy zavatra maharitra nitranga, fa inona no mitranga ao anatin'ny fotoana fohy? Amin'ny ankapobeny dia noho ny tsindry apetrakao mivantana amin'ny perineum dia manindry ny nerve ianao ary manindry ny sasany amin'ireo lalan-dra ary izany no mahatonga ny tsy fahatomombanana. Rehefa tapitra ny fotoana hipetrahana eo amin'ny nerve dia hitaky fahasimbana kely dia kely izay tsy fahavoazana maharitra, amin'ny ankapobeny dia miteraka fahamaimaizana eo amin'ny faritra anompoany, izany no nanjo anao.
Fantatro mihoatra ny fantatro, mahazo bisikileta mety ianao ary misy olona mijery ny lasely sy izay rehetra miaraka aminy. Raha mandeha bisikileta mandritra ny fotoana lava ianao ary isaky ny tsy miteny ao amin'io faritra io izy ary mijanona ho moana ary avy eo dia manao zavatra mitovy hatrany hatrany ianao dia tsy azo ihodivirana ny fahavoazana maharitra fa ny fahaiza-misaina kosa no mitaky ary indray mandeha. dia mahazo ny mety sy ny lasely bisikileta mety fotsiny. Ny vanim-potoana iray manjavozavo aorian'izay dia tsy hiteraka fahasimbana maharitra amin'ny fahatsapana amin'ity faritra ity na ny fananganana ary ny toy izany.
Ny lohahevitra manaraka dia ny tsy fetezan'ny erectile ary avy amin'ny henontsika momba ny tsy fahampiana, misy rohy ve eo anelanelan'ny bisikileta, ny tsy fahatomombanana miverimberina izay mitarika amin'ny tsy fetezan'ny erectile? - ny valiny dia tsia. Ny tena zava-dehibe dia ny maha-zava-dehibe ny tsy fetezan'ny erectile aloha. Ny fizotra izay mitarika amin'ny olan'ny fananganana dia mitovy tanteraka amin'ny fizotrany mitarika aretim-po, izay mitarika aretim-po.
Ka raha voan'ny diabeta ianao, tosidra ambony, na setroka, dia azo inoana fa voan'ny erectile ianao, fa mety marary aretim-po koa ianao. Ny tena marina dia hanomboka bisikileta ny ankamaroan'ny olona antonony. Raha mpitaingina bisikileta ianao izao ary efa antitra toa tsy fetezana erectile, ny eritreritrao voalohany dia tsy tokony hoe, 'Oh, ity no lasely' noho ny bisikileta fotsiny. 'Tokony izany, tsy haleviko ao anaty fasika ny lohako. Mety ho famantarana zavatra tsy mbola voamarina izany.
Mila manamarina an'ity karazana fahasimbana ao amin'ny nerveo pubic ity aho izay mety hitarika tsy fetezana erectile. Tena sarotra ve izany? Izany fahatsapana fahanginana mahatsiravina misy fiatraikany amin'ny perineum izany dia tsy hanome anao ny tsy fetezan'ny erectile. Mandehana ary jereo izany.
Voalohany, ny fananana MOT araka ny fijerin'ny fony, dia maninona raha tsy misy fitsaboana tsy mety amin'ny erectile? Midika izany fa feno ny faribolana. Niainga tamin'ny zavatra somary nihomehy izy io, ka lasa tena olana ara-pahasalamana azonao alaina. Ary ho hitanao izany.
Ahoana ny amin'ny olana mifandraika amin'ny prostaty sy ny homamiadan'ny prostaty. Soa ihany fa tsy misy fiatraikany amin'ny homamiadan'ny prostaty ny bisikileta. Saingy tsy ny fivoaran'ny homamiadan'ny prostaty ihany, fa ny fanontaniana ihany koa raha toa ka voamarina tsy mety amin'ny homamiadan'ny prostaty ianao.
fampiofanana matanjaka amin'ny bisikileta an-tendrombohitra
Ny iray amin'ireo zavatra ampiasainay mba hanondroana ny risika homamiadana prostaty dia ny fanaovana fitsapana ra ary misy ny eritreritra fa raha mandeha bisikileta betsaka ianao dia mety hanorisory ny prostatyo ary mety io ny fitsapana ra-nao izay antsoina hoe PSA antsoina hoe mampiakatra ra ra manandrama fitsapana ra antigen manokana prostaty izay tonga amin'ny fotoana nanaovanao io fitsapana ra io nisondrotra tamin'ny fomba artifisialy ary avy eo dia manana fitsapana maromaro izay tsy nilainao mihitsy satria nandeha bisikileta ianao ary tena tsy marina izany, tsy izany - Misy vintana izany Mety hisy fiantraikany kely amin'izany, fa raha mijery ny fikarohana mifototra amin'ny laboratoara amin'ny maro ianao, maro ny marika molekiola ho an'ny homamiadan'ny prostaty, bisikileta ary manao fanatanjahan-tena dia tsy misy mahasamihafa ireo mariky ny homamiadan'ny prostaty, noho izany dia tsara ny bisikileta. manatsara ny fahasalamanao aretim-po rehetra ny zavatra mampihena ny risika homamiadan anao ary tsy misy fiatraikany amin'ny fitsapana homamiadana Prostate tsy mety ary avy eo mitohy. Soa ihany fa tsy misy ahiana be ny homamiadan'ny prostaty. Ny tokony hataontsika lehilahy dia ny mieritreritra an'izany.
Ka rehefa mihalehibe isika dia avo kokoa ny mety ho voan'ny homamiadan'ny prostaty. Ny zavatra voalohany tokony hataonao izao dia ny mahatsapa ny sasany amin'ireo soritr'aretina ankehitriny, ny zavatra tadiavintsika dia ny zavatra toy ny soritr'aretin'ny rano, ny fanaintainan'ny lamosina, ny olana amin'ny rà mandriaka ao anaty rano, ireo karazan-javatra ireo, raha manahy ianao ireo zavatra ireo, raha miaina ireo zavatra ireo ianao avy eo dia tokony hahita dokotera urologist na dokotera fianakaviana ianao ary hanana adihevitra mirindra momba ny fanombanana. Tsy midika izany fa hozahana homamiadan'ny prostaty ianao, fa io dokotera manokana io dia hitety anao amin'ireo zava-tsoa amin'ny fanadinana ary angamba ireo lafiny ratsy amin'ny fanadinana.
Avy eo ianareo roa dia afaka manapa-kevitra na handroso na tsia. Tsy tiako ny bandy tsy miraharaha azy io amin'ny voalohany. Ary amin'ny ankapobeny, hitantsika ireo zavatra ireo talohan'izao andro izao ary afaka alamina tanteraka izy ireo.
Firy taona no resahintsika eto? Firy taona no tokony hampanahy anao? Ary azoko fa misy ohatra mampalahelo fantatrao, tranga voalohany, saingy marina ny anao.
Ka miaraka amin'ny ahy amin'ny fanazavako dia manana sary diso be aho. Noho izany dia manana fanazaran-tena lehibe izahay ka hisy marary manodidina ny 30 taona ka hatramin'ny faha-80 ka hatramin'ny faha-90 taonany hisaintsaina momba izany, ary raha misy soritr'aretina mampiahiahy dia aza mikoropaka, aza aleveno ao anaty fasika ny lohanao ary mitadiava fifanakalozan-kevitra mety. ary fanombanana ny olana, raha misy saina mena hihetsika ary raha ilaina izany. Ka tsy misy ny fifandraisana misy eo amin'ny bisikileta sy ny homamiadan'ny prostaty, fa ny homamiadan'ny prostaty dia olana lehibe amin'ny ampahany betsaka amin'ny mpitaingina bisikileta satria izy ireo dia lehilahy, antonony izy ireo ary noho izany mila mieritreritra an'izany. Tsy haiko ny momba anao fa ny fakana ahy lehibe indrindra tamin'ity resaka nifanaovako tamin'i Anthony ity dia mety tsy tokony hataontsika ambanin-javatra ny fahasalamantsika, tokony hiatrika ny fahafatesantsika isika ary hitady fanampiana rehefa mila izany isika satria tsy mahazo gs manify angamba no olana lehibe indrindra azontsika hiatrika ny rehetra izao angamba aho nandalo fampahalalana somary be loatra rehefa nilaza taminao ny momba ny penisako tsy misy dikany ao anaty tionelin'ny rivotra fa mieritreritra aho amin'izany fa angamba tokony hiezaka hanana Resaka iray isika rehetra - Miaraka amin'ireo namantsika ao amin'ny klioba angamba no mitantana an'io faran'ny herinandro, farafaharatsiny mba mifampiresaka momba an'ity lahatsoratra ity heveriko fa toerana tsara hanombohana.
Ankehitriny koa, azafady mba alao antoka fa manome ahy ankiben-tànana lehibe hisaorako an'i Anthony tamin'ny fotoanany sy ny traikefany mizara mahafinaritra miaraka aminay, ary raha te hahita lahatsoratra hafa amin'ity lohahevitra ity ianao. Manana iray fotsiny amin'ity fantsona ity izahay izay hanampy anao hividy lasely mety aminao hiatrehana ny olana voalohany amin'ny lohalika.
Tsara ve ny 3 kilometatra amin'ny bisikileta?
Na dia fohy azabisikiletamitaingina toy ny teloan'arivonymandoro kaloria mahavariana maro. Mba hahitana vokatra tsara indrindra dia tokony hihazona ezaka mitohy ianao, fa tsy hijanona ary manomboka rehefa manao izany dia tsy ilaina noho ny antony fiarovana. Ny ezaka mitohy dia manatsara ny vokadratsy ho an'ny kardia sy kaloria amin'ny mitaingina abisikileta.
Raha te hihena ianao, ny sisa ataonao dia ny mandoro kaloria bebe kokoa ary mihinana azy tsy tapaka, ary azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fanovana ny sakafonao sy ny fanaovana fanatanjahan-tena bebe kokoa, ary raha manao fanatanjahan-tena ianao dia ny fanontaniana dia hoe iza no fanatanjahan-tena tsara indrindra Ny fandoroana ireo kaloria tafahoatra ireo dia efa nampitahainay ny fahasamihafana misy eo amin'ny filomanosana sy ny fihazakazahana amin'ny fanandramana mahery vaika ary izao dia te hijery ny maha samy hafa ny bisikileta sy ny fihazakazahana mba hahafahantsika manangana zavatra kely toa ny fandehanana any amin'ny laboratoara fizika eto. Ao amin'ny fandroana ekipa ary hiditra amin'ny siansa isika anio. Nifidy bisikileta sy nihazakazaka izahay satria samy hetsika eto an-tanety avokoa mba hahafahantsika mahazo siansa bebe kokoa amin'ny kajy, fa satria samy ampiasaina betsaka hanampy anao hanary lanja, eny ary talohan'izay Tamin'ny fampitahana ny isa ny kaloria dia nieritreritra izahay fa mendrika ny manamarina ny vo Ny tombony sy ny fatiantoka amin'ny fanatanjahantena tsirairay.
Ny fihazakazahana dia mavesatra noho izany, manampy amin'ny osteoporose amin'ny alàlan'ny fanamafisana ireo taolana sy tonon-taolana etsy ankilany izay tsy dia manome lanja firy ny tonon-taolana ary noho izany dia miteraka risika firy amin'ny ratra. Ny hazakazaka dia mitaky fitaovana kely ary azo atao saika hatraiza hatraiza, fa ny bisikileta kosa mila bisikileta sy kit kely kely na dia manana bisikileta mihodina anaty trano ihany aza ny ankamaroan'ny gym ary misy ihany koa ny safidy hafa, ny fanatanjahan-tena dia mety ho tia fiaraha-monina, na dia mety ho somary be kokoa aza ny bisikileta azo atao amin'ny haavo somary ambany kokoa, azonao atao izao mazava ho azy avy amin'ny teboka farany Mitaingina bisikileta lava kokoa satria tsy dia miady saina. Nanapa-kevitra ny hampiasa kaloria ho refin'ny vatanay izahay satria ny ankamaroan'ny olona dia mahalala an'ity singa ity ary fomba mora handrefesana ny angovo tena misy marina izany.
Hiresaka kilocalories ianao, izay famantarana ny kaloria an'arivony, satria io no isa azonao amin'ny marika momba ny sakafo, fa koa amin'ny mpanaraka ny fanatanjahan-tena, eny, mora be izao ny mampihena ny lanjanao, mila miara-mandoro anao daholo ianao ny kaloria bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fampihetseham-panao sy ny fanaonao isan'andro, avy eo alao amin'ny alàlan'ny sakafo sy zava-pisotro mandritra ny andro. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, andao hojerentsika ny fomba handrefesantsika ny fandaniantsika kaloria amin'izao fotoana izao, misy safidy maromaro fa ny sasany kosa dia marina kokoa noho ny hafa izao dia afaka mampiasa calculatera kaloria tsotra ianao ary amin'ity tranga ity dia apetraho amin'ny taonanao ny lanjanao ary avy eo tombano ny halehibeny niara-niasa taminao, fa hahazo isa marikivy ianao amin'izany satria ny kajy kaloria dia tsy maintsy mamantatra hoe matanjaka ianao, omeo famantarana ny kaloria entinao mandoro. Miala sasatra amin'izany izahay, ho mpanara-maso na fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena izay afaka mandrefy ny tahan'ny fitempon'ny fonao mandritra ny hetsika rehetra mba hahafantarany ny hamafin'ny fampiofananao ary avy eo ampifangaroina amin'ireo angona manokana efa voatahiry ao hanome anao To be afaka manome tombana azo antoka kokoa momba ny habetsaky ny kaloria nolaloranay tamin'ity hetsika ity, ka anio dia handeha lavitra izahay handrefesana ny vokatra avy amin'ny culinary ataonay amin'ny teknika fandrefesana marina indrindra, noho izany dia handeha ho any amin'ny laboratoara izahay hijerena inona marina no dikan'izany.
Tsy mihaino intsony aho misaotra anao tamin'ny fampiasanao ny laboratoarao sy ny fotoanao anio dia te hijery kaloria may sy mifaninana amin'ny bisikileta izahay ary tiako ho fantatra hoe ahoana no ahafahantsika manao izany sy ny fomba handrefesana izany marina eto. dia handrefy ny fanjifana oksizenina izay matetika antsoina hoe vo2 ary ny olona eto ny vo2 max, fa ity kosa dia submaximal. Izy io koa dia ny habetsan'ny oksizenina ampiasainao amin'ny hery fampihetseham-batana iray, ary miorina amin'izany, miaraka amina fiheverana vitsivitsy, azonao atao ny mampiofana fandaniana kaloria ary miharihary fa miovaova arakaraka ny tanjona iasanao miasa sy ananantsika fotoana be dia be ankehitriny. Raha misafidy karazana ambaratonga roa isika hahitana hoe iza no mpampianatra tsara indrindra, dia mieritreritra izay tianao hatao aho anio satria mazava ho azy fa te hijery olona iray ianao mba haharitra ka afaka mijery ny haavo 2, tsara tarehy Fanatanjahan-tena aerobika ary avy eo mety ho ambaratonga 4, ary fampiofanana miorina amin'ny tokonam-baravarana izay mety ho faritra hipetrahan'ny olona mandritra ny fotoana voafaritra manokana, ary ataonao rehefa mandray vakiteny vo2 ianao dia mahita fahasamihafana lehibe amin'ny fihinanana oksizena avy amin'ny tetezamita avy mandeha amin'ny fihazakazahana tsara, ary isaky ny teny, mila fanovana hafainganam-pandeha aho, eny, faly aho mahita ny valiny azoko sy Heather tamin'ny fandrefesana ny kaloria nofonosinay rehefa nihazakazaka ary avy eo nandeha bisikileta. hiasa mafy kokoa eo akaikin'ny tokonam-baravarany ao amin'ny faritra 4, saingy hifikitra amin'ny fahafahan'ny aerobika ao amin'ny faritra misy ahy aho hampitombo ny hamafiny.
Mihevitra ny ankamaroan'ny olona fa mandoro kaloria betsaka kokoa noho ny mandeha bisikileta ny fihazakazahana, ka ho faly izahay hahita raha marina izany ary raha tanteraka ny fahasamihafana eo amin'ny bisikileta sy ny fihazakazahana, tonga ny fotoana hanaovan'i Jonathan matematika sy hanaovana ny cardio Pooh ho an'ny tsirairay avy amintsika ezaka hikajiana tsara n tafaverina fotsiny ny ainay Jonathan tiako hojereko aloha ny isa Voalohany indrindra, ahoana no hivoahan'ny kaloria rehefa mitaingina bisikileta raha ampitahaina amin'ny fihazakazahana Rehefa mijery azy mandritra ny adiny iray isika, rehefa mihazakazaka mitady adiny iray, eo ho eo amin'ny 900 91 kaloria isan'ora ary avy eo Viking 868 dia mety, noho izany dia tsy mitovy ny 124 ary avy eo ny fehezan-teny dia somary avo kokoa ny Sotracer ka ny antony mahatonga azy ho lehibe kokoa dia miharihary, ka mampiasa bebe kokoa ny Junior, ka raha ny fanjifana angovo tena izy dia antenainao ho avo kokoa, noho izany 1156 amin'ny fihazakazahana ary 994 amin'ny bisikileta mitondra fiara dia mivoaka kely kokoa ny fahasamihafana amin'ny 212. Heveriko fa azo antoka ny milaza fa samy nieritreritra isika fa mihazakazaka dia ho eo amin'ny lohalaharana Ny fanandramana kelinay, izay nataony, raha jerena ny singa filokana amin'ny fanatanjahan-tena ary ny hoe akaiky kokoa ny bisikileta amin'ny fampihetseham-batana iray manontolo dia manana izany tombony izany, saingy mazava ho azy fa azo atao ela kokoa ny bisikileta. Raha manam-potoana be eo anilanao ianao dia mety ho tsara kokoa ny mampiasa bisikileta handoro kaloria bebe kokoa, fa ny tenako manokana dia ny mihazakazaka no fomba mora indrindra hampihenako ny lanja, ny ampahany satria manakana ny filako, ny ampahany satria rehefa mahazo aho zavatra toy izao dia misotro kafe sy mofomamy matetika aho, izay tsy ratsy mihintsy izao raha manana iray amin'ireto Sports ireto ianao ary mety ho mora manandrana mamoy lanja kely ianao azafady mba ampahafantaro anay ary apetraho amin'ny fanehoan-kevitra dia izahay ' d tia mandre momba an'io. Antenaiko fa nahafinaritra anao ny lahatsoratray Jereo ny erak'izao tontolo izao ary ahitanao ireo lahatsoratra hafa nataonay ary raha te hahita lahatsoratra iray izahay fa very ny kaloria, an'arivony maro amin'izy ireo, matahotra izahay eto amin'ity lahatsoratra ity ary raha te hahita fampitahana ianao eo anelanelan'ny filomanosana sy ny fihazakazahana raha resaka kaloria no ahitanao azy eto ambany
Hatraiza ny dingana 10000 amin'ny bisikileta?
Dingana 10.000sahabo ho 5 kilaometatra. Raiso ara-dalàna 10DINGANAary refesina nyelanelanaeo anelanelan'ny fanombohana sy ny fiafaranao.
Miarahaba antsika rehetra, efa henonao ve ny fomba fanatanjahan-tena 10 000? Na dia fomba tsara hitazomana ny tenanao aza io dia tsy tena ilaina. Noho ny fomba fiainanao be atao dia sarotra ny mandray dingana 10.000. Ka inona no hatao? Saika, saika ny zava-drehetra dia manana safidy hafa ary amin'ity tranga ity dia fampihetseham-batana antonony.
Manomboka amin'ny fitsambikinana mankany amin'ny jogging mankany yoga dia misy safidy maro ary amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba azy rehetra amin'ny antsipiriany isika. Andao hanomboka amin'ny fampiharana tsy dia fantatra loatra. Raha mieritreritra momba izany ianao dia tsy fanatanjahan-tena izany. # 1 Manosika mpamaky bozaka Mety hieritreritra ianao fa ny fanapahana ny bozaka dia hetsika mandreraka isan-kerinandro fotsiny.
Amin'ny lafiny maro dia. Ny fanosehana ny bozaka dia fanazaran-tena lehibe ho an'ny vatanao; iray izay afaka mandoro kaloria 135 ao anatin'ny adiny iray monja. Tsy ratsy izany, sa tsy izany? Fanampin'izay, mavesatra ny lanjanao, vao mainka mandoro kaloria ianao.
Raha milanja 155 pounds ianao dia afaka mandoro kaloria mihoatra ny 160 ao anatin'ny 30 minitra mandritra io ora io ary 300 kilao eo ho eo no may. Raha te-hizara fehezanteny izy ireo dia ataovy izany. Andramo ny seta roa misy fiatoana 5 minitra eo afovoany.
Raha reraka loatra ianao dia aza tofoka. Ny fanatanjahan-tena dia tsy midika hoe lany hery ianao, koa inona no andrasanao? Mety mila manapaka ihany koa ny bozinao. Atosory ny mpanao bozaka! # 2 Yoga Ity dia iray amin'ireo fampihetseham-batana izay ananantsika. niresaka tamin'ny fiandohan'ny lahatsoratra.
Betsaka ny fanazaran-tena izay latsaka amin'ny fampiharana ny yoga. Ny karazany sasany dia ny miaina. Ankehitriny dia misy ireo izay momba ny fahalalahana.
Ny fanazaran-tena yoga sasany dia tsara kokoa amin'ny tanjaky ny hozatra sasany Izany no tsara kokoa hatrany ny mihaona amin'ny manam-pahaizana alohan'ny hirosoana amin'ny dia yoga. Amin'ny ankapobeny, ny kilasy yoga dia mety hanampy be amin'ny fiatrehana ny fahaketrahana. Ny fampihetseham-pofonaina amin'ny yoga dia nanaporofo koa ny lanjan'izy ireo.
Ny fampihetseham-batana amin'ny yoga dia tsara ho an'ny ankizy izay mbola mivoatra ny hozatra sy ny hozatra. Ho fanampin'izay, ny sasany amin'ireo fanazaran-tena ireo dia hanampy amin'ny fampiroboroboana ny fitomboany ihany koa. Ny tena zava-dehibe ho an'ny olon-dehibe, ny sasany amin'ireto fampihetseham-batana ireto dia mandoro kaloria sy tavy betsaka.
inona ny tempe
Tokony hanandrana azy ireo ianao amin'izay. Alohan'ny handehanantsika amin'ilay lahatsoratra, azonao atao ny manohy ny fanavaozana ny votoatiny farany amin'ny alàlan'ny fanindriana ny famandrihana sy fanenoana ny lakolosy fampandrenesana. Raha mbola eo ianao dia jereo ny lahatsoratray momba ny zavatra 6 tokony ho fantatrao momba ny coronavirus Andao hiverina amin'ny lohahevitra ankehitriny. # 3 Jump Rope Rehefa tsy afaka mihazakazaka ianao dia tsara kokoa ny manandrana fanazaran-tena izay hanampy anao hitazona endrika mandritra ny quarantine.
Andramo ny mitsipaka tady fa fanazaran-tena feno iray izay tsy vitan'ny hoe hanampy anao hihena be fotsiny fa handoro kaloria sy tavy koa. Raha nitsambikina tamin'ny tady nandritra ny 10 minitra ianao dia mitovy amin'ny fihazakazahana kilometatra iray ao anatin'ny 8 minitra fotsiny. Raha ny marina, ny tady mitsambikina adiny iray dia afaka manampy anao hamoy kaloria manodidina ny 1.600 isan'andro.
Ankoatr'izay dia manatsara ny fandanjalanjan'ny vatanao izy io ary manamafy ny tongotrao, soroka ary sandrinao. Ka nanaiky mihitsy aho fa ny fitsipahana tady dia afaka manatsara ny fandrindrana, ny fifantohana ary ny fiaretana. Ny zavatra mahaliana iray hafa momba ny tadin'ny fitsambikinana dia ny famoahana endorphins ao amin'ny atidohanao.
Raha tsy fantatrao dia manampy amin'ny ady amin'ny famoizam-po sy hampitony ny toe-tsainao ireo endorphins. Ka ity fanatanjahan-tena ity dia tsara ho an'ny vatanao sy ny atidohanao koa. Bisikileta # 4 Noho io areti-mandoza io dia mety ho sarotra ny mivoaka, saingy mbola afaka mitaingina bisikileta ihany ianao.
Ny hany ilainao dia ny bisikileta mijanona hanao fanazaran-tena amin'ny bisikileta avy amin'ny fiononan'ny tranonao. Na dia tsy misy maharesy ny fahatsapana tontolo voajanahary aza, ny bisikileta dia mitazona ny tombony na aiza na aiza anaovanao azy. Ny bisikileta dia iray amin'ireo karazana kardio manerantany mahomby indrindra.
Mihatsara ny fivezivezena rehefa mandeha bisikileta. Noho io antony io dia misy fihenan'ny oksizena tampoka ao amin'ny vatanao. Afaka mamoaka rà mora kokoa ny fonao mandritra ny bisikileta.
Manatanjaka ny hozatry ny fonao koa izy io ary manamafy ny hery fiarovanao. Ny bisikileta dia tsara ihany koa amin'ny fitazonana ny tosidranao hojereko. Raha tsy fantatrao, ny tosi-dra na fiakaran'ny tosidrà dia mety hitarika aretim-po na lalan-dra.
Ka angamba tsy tokony ho diso anjara amin'ny fotoana mety amin'ny bisikileta ianao. # 5 Mandeha Andeha hatrehana izany, tsy ny rehetra no afaka manana bisikileta fanatanjahan-tena. Ny fizotrany dia mitovy amin'ny bisikileta.
Tian'ny vatanao izany rehefa misy oksizena be mikoriana ao amin'ny lalan-dranao. Malalaka kokoa ny fandehanan-drà. Ny maha samy hafa ny bisikileta sy ny mandeha dia ny angovo mandeha tsy dia mampiasa angovo firy raha ampitahaina.
Midika izany fa azonao atao ny manohy manao ny lavarangana ao an-trano intsony. Aza adino fa toy ny bisikileta ihany, ny fampandehanana dia mampitombo ny fiasan'ny vatanao. Zavatra iray hafa tokony hotadidina koa ny fitsaharana.
Raha tsy misy fitsaharana dia tsy hiala sasatra mandritra ny 3 ka hatramin'ny 5 minitra eo anelanelan'ny andiany hiala sasatra ianao. T Hut dia tokony hanampy anao hijanona amin'ny haavon'ny angovo tsara indrindra. # 6 Jogging: Raha afaka mivoaka any ivelany ianao, dia mety ny fampihetseham-batana.
Hamarino tsara fa mijanona ho hydrated amin'ity iray ity ianao. Fantatra fa manana tombony betsaka ny jogging. Izy io dia afaka manatanjaka ny hozatrao, indrindra ny hozatry ny tongotrao.
Izy io koa dia afaka manampy amin'ny fananganana taolana mahery. Raha te hihena ianao mandritra ny vanim-potoanan'ny quarantine anao, ity no fomba tsara indrindra aleha. Ny fihazakazahana jogging tsotra dia mety handoro tavy sy kaloria, ary afaka manampy koa izany.
Alao antoka fotsiny fa manana proteinina ampy ianao. Na dia mety ho toa tsara amin'ny teôria aza ny fihenan-danja, raha very ny hozatra dia mety hampivarahontsana izany. Koa mitandrema azafady mba tsy hampihena ny tavy fihinananao amin'ny tavy vitsivitsy tsy mahasalama.
Okay, efa nolazainay taminareo ny momba ireo fampihetseham-batana rehetra ireo. Izany dia mitondra antsika amin'ny fanontaniana manaraka
Hatraiza ny fampiasana azy ireo? Raha mandray dingana 10.000 isan'andro ianao dia hanana fanatanjahan-tena ampy hanampiana anao amin'ny andro tsy misy fanatanjahan-tena. Amin'ireo olana ankehitriny manodidina ny Covid-19 dia mbola sarotra kokoa noho izany ny mahazo azy. Ka raha tokony handray dingana 10.000 ianao dia manaova dingana vitsy kokoa amin'ny hafainganam-pandeha haingana sy hery bebe kokoa.
Hanampy anao hahatratra ny haavo ara-batana amin'ny hetsika tokony hotazominao. Ny tena zava-dehibe dia tsy mametraka fihenjanana amin'ny fahazarana isan'andro izany. Azonao atao ny manao an'ireto fampihetseham-batana ireto nefa tsy misy fiatraikany amin'ny asanao na amin'ny fotoanao manokana.
Ny tena zava-dehibe, ireo fampihetseham-batana rehetra ireo dia mampiasa hozatra marobe. Ohatra, ny tady mitsambikina dia mandrakotra ny vatana iray manontolo. Voakasik'izany ny soroka, ny zanak'omby ary ny sandrinao.
Inona ny hevitrao? Mety misy safidy iray amin'ireo fampihetseham-batana ireo hisolo ny dingana 10.000 isan'andro? Ampahafantaro anay amin'ny hevitra etsy ambany. Manantena ny hihaino anao izahay!
Manisa atody ve ny bisikileta?
Mitaingina abisikileta notsy, ao aminy irery, foy anatodyHaingankaingana. Na izany aza, mitaingina ny anaobisikileta nomamela anao 'mandeha' lavitra lavitra amin'ny fotoana mitovy, izay midika fa nyatody notonga haingana kokoa amin'ny teboka fanatodizany 2/5 / 10km arydiafoy ara-dalàna.
Tsara ve ny bisikileta adiny iray isan'andro?
Bisikiletairayoranyandroho an'ny fihenan-danja dia fomba tsara hanamafisana ny fihenan'ny lanja. Olona 180-kilaobisikiletaho anoraamin'ny kalitao antonony dia mandoro kaloria 650 eo ho eo. Na izany azabisikileta30 minitra aandrotsy tapaka mandritra ny herintaona dia mety handoro kaloria maherin'ny 100.000 ary mety hihena 30 kilao eo ho eo.25 Jul. Feb 2020
Mandoro tavy amin'ny kibo ve ny bisikileta?
Bisikiletadia fampihetseham-batana tsara hanampiana ny fitondran-tenanao mahomby. Fanatanjahan-tena tena mandaitra izanyafakamanampy anaomampihena ny tavy kiboary mahatratra haingana ny tanjon'ny fihenan-danja.4 Jona. Oktobra 2018
Mora ve ny mandeha bisikileta 2 kilaometatra?
Raha tsy hoe henjana ny fifamoivoizana sy ny lalana2 kilaometatradia homora. Farafaharatsiny aorian'ny herinandro voalohany na roa. Araka ny nolazain'i grmi66, 7 min. Angamba 15 amin'ny andro ratsy.31 Mey 2012
Inona no mitovy amin'ny bisikileta amin'ny mandeha?
Tao amin'ny fanadihadiana maromaro notontosain'ny mpahay siansa malaza, dia voafaritra fa, ambanymitovyfepetra,bisikiletanitaingina farafaharatsinymitovynyMANDEHA. Terrain no iray amin'ireo anton-javatra lehibe indrindra hamaritana ny fahasamihafana misy eo amin'ny mitaingina abisikiletaSYMANDEHAho an'ny fanatanjahan-tena.
Aleo mandeha an-tongotra iray kilaometatra na bisikileta iray kilaometatra?
Ny bisikileta dia mahomby kokoa noho nyMANDEHA, ka mety hiasa mafy kokoa ianao amin'nyMANDEHAhaingam-pandeha ary angamba ampiasao bebe kokoa ny fonao, havokavoka ary hozatra lehibe. Etsy ankilany, ny bisikileta dia mety ho kely kokoa amin'ny valahanao, ny lohalinao ary ny kitrokao noho nyMANDEHA.
Inona no azonao atao amin'ny bisikileta amin'ny Pokemon Go?
Amin'izany fanamarihana izany, dia ampiasao ny bisikiletanao mba hidirana amin'ny Pokéstops, izay azonao atao ny manamarina ny toerana misy anao mialoha, ary ny foy atody, izay mila mitaingina elanelana fotsiny. Tena tsy misy fomba fitetezana ny arabe mankany Pokémon ary mitazona ny masonao tsy hijery ny lalana amin'ny fotoana iray ihany. Mifandraisa amin'ireo mpanazatra Pokémon hafa!
Azo antoka ve ny milalao Pokemon Go rehefa mitondra fiara?
* Mba hahazoana antoka fa voaro ianao sy ny manodidina anao, aza milalao Pokémon GO rehefa mitaingina bisikileta, mitondra fiara, miasa milina mavesatra, na manao zavatra hafa mila ny sainao manontolo.
Azonao atao ve ny mametaka atody amin'ny bisikileta ao amin'ny Pokemon Go?
Ary toy ny mahazatra, mitodika any aorianao alohan'ny hisintonana anao ary mihevera hatrany ny bisikileta hafa na ny fivezivezena eny an-dalana. Amin'izany fanamarihana izany, dia ampiasao ny bisikiletanao mba hidirana amin'ny Pokéstops, izay azonao atao ny manamarina ny toerana misy anao mialoha, ary ny foy atody, izay mila mitaingina elanelana fotsiny.